ZeepLive Apk Download Ho an'ny Android  | APKOLL
ZeepLive Apk Download ho an'ny Android 
Aprily 2, 2022 Janoary 18, 2022 by Reyan Ahmad
Salama daholo, mahatsapa ho irery ve ianao ary mila olona hiresahana? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ny sehatra tsara indrindra ho anao, izay fantatra amin'ny anarana hoe ZeepLive. Io no rindranasa sosialy Android farany, izay manolotra olona mavitrika an'arivony avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, izay ahafahanao miresaka, mifampiresaka, ary mifampiresaka video.
Araka ny fantatrao dia misy olana samihafa ho an'ny olona rehetra, saingy ny zava-drehetra dia azo vahana amin'ny fizarana. Matetika ny olona dia tsy mahazo aina amin'ny fizarana ny zavatra tsapany amin'ny namana sy ny fianakaviany, noho ny henatra na matahotra ny hovonoin'izy ireo. Noho izany, miatrika olana samihafa izy ireo, anisan'izany ny adin-tsaina.
Noho izany, ny fomba tsara indrindra hampihenana ny adin-tsaina dia ny fizarana ny fahatsapanao amin'ny hafa. Noho izany, te-hiditra anaty vondrom-piarahamonina ve ianao, izay tsy misy olona miraharaha ny lokonao, ny fivavahanao na ny zavatra hafa? Raha eny dia natolotray anao ny lampihazo, izay tadiavinao ato amin'ity pejy ity dia hizara izany rehetra izany izahay.
Manolotra ny vondrom-piarahamonina lehibe indrindra izy io, izay ahitana tovovavy marobe izay afaka miresaka sy mizara ny fahatsapany ny olona. Misy endri-javatra mahavariana kokoa taonina ao amin'ity fitaovana ity, izay mety tianao ho fantatra. Noho izany, mijanona miaraka aminay mandritra ny fotoana fohy ary fantaro izay rehetra momba azy.
Topimaso momba ny App ZeepLive
Izy io dia rindranasa Android, izay manome ny sehatra tsara indrindra hihaonana amin'ny olona vaovao eran'izao tontolo izao. Afaka mifampiresaka ny mpampiasa, izay ahafahan'izy ireo mizara ny heviny, ny fahalalany, ny eritreriny, ny fivezivezeny ary ny maro hafa. Manolotra ny mpampiasa azy mihitsy aza izy io mba hahazo namana ary hanaraka olon-kafa koa.
Manolotra ireo mpampiasa hahazo vola mihitsy aza izy ireo. Raha malaza ianao ary maro ny olona miantso anao isan'andro, dia afaka mamaritra vola isan-minitra ianao. Izay olona miantso anao dia tsy maintsy mandoa ny vola. Hahazo ny vola ianao raha vantany vao mifarana ny antso.
Manana ny rafitra tsara indrindra araka ny lahy sy ny vavy, izay hanome ny antsipiriany sy ny id ny mifanohitra lahy sy ny vavy. Raha lehilahy ianao, dia ho tonga ho azy ny kaonty vehivavy rehetra. Amin'ny alàlan'ity rafitra ity, ny mpampiasa dia hahazo ny fomba tsara indrindra hifandraisana amin'ny olon-kafa.
The App mampiaraka manome ny mombamomba ny mpampiasa tsirairay, izay matetika dia isa. Amin'ny alàlan'ny laharana id, ny mpampiasa dia afaka mahita mpampiasa hafa. Io no dingana tsara indrindra hahitana olona hafa, amin'ny alalan'ireo endri-javatra ireo dia afaka mahita valiny marina amin'ny mombamomba ny olona rehetra.
ZeepLive Chat dia manolotra fanomezana ihany koa, izay azon'ny mpampiasa zaraina. Matetika, ny fanomezana rehetra misy dia vidiana, midika izany fa tsy maintsy mampiasa vola madinika ianao hividianana fanomezana. Afaka mizara fanomezana amin'ny hafa ianao ary manaitra ny olon-kafa. Ny fanomezana be dia be dia hampitombo ny lazanao. Noho izany, mila mahazo fanomezana betsaka araka izay tratranao ianao mba ho malaza.
Izy io dia manome sivana ao amin'ny fakantsary, izay midika fa afaka mametraka sivana samihafa ianao araka ny tontolo iainanao. Izy io aza dia manome rafitra loko hoditra, izay ahafahan'ny mpampiasa manova ny lokon'ny hodiny. Misy fiantraikany isan-karazany, emojis, stickers ary endri-javatra hafa, izay ahafahan'ny mpampiasa mahazo ny fifandraisana tsara indrindra.
Misy endri-javatra bebe kokoa amin'ny taonina ao amin'ity rindranasa ity, izay azonao idirana sy ataovy namana. Noho izany, ampidino ity rindrambaiko ity ary mahazo fidirana tsy voafetra amin'ny resaka. Raha manana olana ianao dia aza misalasala mifandray aminay. Halaminay haingana araka izay haingana ny olanao rehetra.
Size 49.41 MB
Anaran'ny fonosana com.zeeplive.app
Developer Zeep Live
Ilaina ny fanampiana kely indrindra 5.0 ary any ambony
Endri-javatra manan-danja amin'ny App
Misy endri-javatra an-taonina amin'ity rindranasa ity, izay ahafahanao mahazo fialamboly tsara indrindra. Nolazainay taminay etsy ambony ny sasany amin'ireo fiasa lehibe ary hizara ny sasany amin'ireo fiasa lehibe ao amin'ny lisitra eto ambany izahay.
Lisitry ny fiasa lehibe
Mpampiasa mavitrika an'arivony
Lahatsary miresaka video sy lahatsoratra
Fivarotana fananana namboarina
Misy ny antso an-tsary ny effets, sivana ary endri-javatra hafa
Misy bara fikarohana hikarohana olona haingana
Manana rindrambaiko mitovy aminao izahay.
Mika Live Chat
Azo alaina ao amin'ny Google Play Store izy io ary azonao sintonina eto amin'ity pejy ity ihany koa. Raha te-hisintona azy amin'ity pejy ity ianao dia mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny. Hita eo amin'ny farany ambony sy ambany amin'ity pejy ity izy io. Mila mikitika azy fotsiny ianao, manomboka ho azy ao anatin'ny segondra vitsy ny fisintomana.
ZeepLive Apk no fampiharana tsara indrindra hahitana sy hihaonana olona vaovao. Ny mpampiasa dia afaka manao namana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao miaraka aminy ary mizara ny hevitrao sy ny olanao. Io no fomba tsara indrindra hijerena ny toetran'ny olona samihafa nefa tsy mivoaka ny efitranonao. Raha mila fampiharana sy hacks mahavariana kokoa, tsidiho hatrany ny tranokalanay.
Sokajy Apps, Social Tags App mampiaraka, ZeepLive, ZeepLive Apk, ZeepLive App Post Fikarohana
Fampidinana fampiharana Animeflv ho an'ny Android 
PESHUB 21 Apk Download Ho an'ny Android 